kathmandu metropolitan city(kathmandu metropolitan city) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न निषेध गरिएको छ। महानगरपालिका नगरसभाको ११ औँ अधिवेशनबाट स्वीकृत नीतिसमेतका आधारमा सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न निषेध गरिएको हो। काठमाण्डौ महानगरले आज एक सूचना प्रकाशित गरी महानगर क्षेत्रभित्रको सडक, गल्ली, पार्क, सवारी बिसौनीस्थल, सरकारी कार्यालय वा...
साउनबाट कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने, एकैठाउँमा मिसाए रु. ५०० जरिवाना
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरवासीले साउन १ गतेदेखि फोहोरको वर्गीकरण (कुहिने र नकुहिने छुट्याउनुपर्ने) गर्नुपर्ने भएको छ। काठमाण्डौ महागरपालिकाको वातावरण तथा कृषि विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै नगरवासीलाई साउन १ गतेदेखि कुहिने र नकुहिने फोहोर घर (स्रोत)मै छुट्याउन आग्रह गरेको हो। फोहोरको वर्गीकरण नगरी एकैठाउँमा मिसाउनेलाई ५०० रुपैयाँ...
पारदर्शी र सुशासनका लागि काठमाण्डौ महानगर मातहतका सबै कार्यालयमा सीसी क्यामेरा
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिका मातहतका सबै कार्यालयमा सीसी क्यामेरा जडान गरिने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९–८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले महानगर मतहतका सबै कार्यालयमा सीसी क्यामेरा जडान गरिने बताएका हुन्। महानगरका कामहरु पारदर्शी र सुशासन कायम गर्न मातहतका सबै कार्यालयमा सीसी क्यामेरा...
काठमाण्डौ महानगरले हरेक आइतबार ‘जनतासँग मेयर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले ‘जनतासँग मेयर’ कार्यक्रम चलाउने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९–८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले जनतासँग मेयर कार्यक्रम चलाउने घोषणा गरेका हुन्। उनका अनुसार हरेक साता आइतबारका दिन जनतासँग मेयर कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। ‘यो कार्यक्रमअन्तर्गत जनतासँग...
करदाताको स्वास्थ्य बीमा गर्न ५०% अनुदान दिने काठमाण्डौ महानगरको घोषणा
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले करदाताको स्वास्थ्य बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। काठमाण्डौ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। महानगरले करदाताको स्वास्थ्य बीमामा आकर्षित गर्न यस किसिमको नीति लिएको हो। ...
शौचालय सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न दिन इच्छुकलाई सम्पर्क गर्न काठमाण्डौ महानगरको आह्वान
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले होटल, रेस्टुरेन्ट, बैंकलगायतले शौचालय सार्वजनिक रुपमा सर्वसाधारणलाई प्रयोग गर्न दिने भए ७ दिनभित्र सम्पर्क गर्न आह्वान गरेको छ। महानगरको गत जेठ १६ को नगरकार्यपालिका बैठकले शौचालयमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच पुर्याउन महानगर क्षेत्रभित्र रहेका होटेल तथा रेस्टुराँलगायतको शौचालय प्रयोग गर्न सकिने...
मनोरञ्जन कर बुझाउन काठमाण्डौ महानगरको ताकेता, कसले कति तिर्नुपर्छ ?
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले मनोरञ्जन कर बुझाउन ताकेता गरेको छ। महानगरपालिकाको कार्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गरी महानगर क्षेत्रभित्र रहेका मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित व्यापार–व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई मनोरञ्जन कर बुझाउन सूचित गरेको हो। बागमती प्रदेशको प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८ को अनुसूची–३ ले तोकेको दररेटमा...
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले महामारी तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला केही निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयविपरीत महानगरपालिकाका केही निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर तीव्र रूपमा बढिरहेको भन्दै सरकारले गत पुस २७...
काठमाण्डौ महानगरले बक्यौता नतिर्ने करदाताको सबै सेवा बन्द गर्ने
काठमाण्डौ। काठमाण्डौ महानगरपालिकाले रु. ६ करोड ८ लाखभन्दा बढी पुरानो बक्यौता रकम असुल गरेको छ। विगत २८ वर्षदेखि घरजगगा र सम्पत्ति कर नतिर्ने ठूला करदाताले रकम बुझाउन आलटाल गरेकाले कामपाले गत साउनमा तिनको नाम सर्वजनिक गरेको थियो। दुई चरणमा गरी ५२ ठूला करदातको नाम सार्वजनिक गरिएकामा हालसम्म ११ करदाताले बक्यौता रकम चुक्ता गरेका छन्।...
महानगरले थाल्यो कर नतिर्ने ठूला करदाताका घर–घरमा पञ्चैबाजा अभियान
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले कर नतिर्ने ठूला करदाताको घरघरमा गएर दबाब दिन आजबाट पञ्चैबजार अभियान सुरु गरेको छ। घरजग्गा, सम्पत्तिलगायत व्यवसायिक कर नतिर्ने र अटेर गर्ने ठूला करदातालाई दबाब दिन महानगरको टोली बाजागाजासहित घरघरमा पुगेको हो। पहिलो चरणमा महानगरले काठमाण्डौको न्युरोड, नयाँ बजार, सोल्टीमोडलगायतका क्षेत्रमा...
कर तिर्न ठूला करदातालाई काठमाण्डौ महानगरले दियो ३ दिनको समयसीमा, नत्र कडा कारबाही
काठमाण्डौ। काठमाण्डौ महानगरपालिकाले २३ वटा ठूला करदाताको विवरण सार्वजनिक गर्दै ३ दिनभित्र घरजग्गालगायतमा लाग्ने कर दाखिला गर्न समयसीमा दिएको छ। यदि ३ दिनभित्र कर दाखिला नगरे सिलबन्दी गर्ने चेतावनी पनि महानगरले दिएको छ। महानगरले सार्वजनिक सूचनाको समेत अटेर गर्दै आएका २३ वटा ठूला करदाताको कार्यालयस्थलमै पुगेर माइकिङ गर्दै आज...
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले विद्युतीय सवारीसाधनमा सतप्रतिशत कर छुट दिने भएको छ। आज नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। घविद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न सवारी करमा सतप्रतिशत छुट दिने निर्णय काठमाण्डौ महानगरले लिएको छ। यसका साथै नेपाल...
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले बन्दाबन्दीको समयमा कसैलाई छाक टार्न समस्या भए हटलाइन नम्बर ११८० मा फोन गर्न आग्रह गरेको छ। दोस्रो लहरको काभिड–१९ का कारण देशका अधिकांश जिल्लामा बन्दाबन्दी गरिएको छ। यस समयमा कसैलाई दैनिकी चलाउनका लागि खाद्य सामग्री आवश्यक परे महानगरपालिकाको हटलाइन नम्बरमा फोन गर्न भनिएको हो। अघिल्लो वर्षको...
कुनै समस्या परे काठमाण्डौ महानगरवासीले यी नम्बरमा फोन गर्न सक्ने
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले महामारीसँग सम्बन्धित वा अन्य कुनै समस्या परे आफू, उपप्रमुख वा नजिकको जनप्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छन्। कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि अपिल जारी गर्दै प्रमुख शाक्यले जनप्रतिनिधि र महामारी नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारीको व्यक्तिगत सम्पर्क नम्बर...
कर नतिर्नेलाई ७ दिनभित्र उपस्थित हुन काठमाण्डौ महानगरपालिकाको निर्देशन
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले कर नतिरेका करदातालाई सात दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। कामपाको राजस्व विभागले अनुगमनका क्रममा कर छली गर्नेलाई यस किसिमको निर्देशन दिएको हो। व्यवसाय दर्ता नगर्ने, बहाल कर नतिर्ने, व्यवसायको प्रकृतिअनुसार दर्ता नगर्ने, विवरण कम देखाएर कम राजस्व तिर्न खोज्ने वा कर छलीको शङ्का...